लोकदोहरी गायिका संगिता थापा मगर सँगको अन्तर्वार्ता :‘प्रतिभा र क्षमता भएकालाई खासै समस्या छैन’
Home अन्तर्वार्ता लोकदोहरी गायिका संगिता थापा मगर सँगको अन्तर्वार्ता :‘प्रतिभा र क्षमता भएकालाई खासै समस्या छैन’
लोक तथा दोहोरी गायिकाको रूपमा श्रोतामाझ चिनिनुभएकी संगिता रेश्मी थापामगरको जन्म सेखाम–४, गञ्जर, स्याङ्जामा आजभन्दा २४ वर्षअघि भएको हो । बुवा हेमबहादुर थापामगर र आमा जिनाकुमारी थापामगरको कोखमा जन्मे हुर्केकी संगितालाई आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षादेखि प्रवेशिका परीक्षासम्म रत्नपुर–८, दामाचौर, स्याङ्जास्थित जनहित माविबाट उत्तीर्ण गर्नुभएको हो । हाल भने नेपालटार, काठमाडौंस्थित एम.आर. कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ । अत्यन्तै सुमधुर स्वरकी धनी संगितासँग हङकङ नेपाली डटकमका लागि पोखरास्थित संवाददाता रूद्र श्रीसमगरले गरेको कुराकानी : आजभोली केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
खासमा अहिले म चाडबाडको बेला भएको हुनाले स्टेज कार्यक्रमका लागि नै व्यस्त भइरा’छु । केही समय अघिमात्र कोरियामा साँगीतीक कार्यक्रम पस्किएर आएँ र हाल म, आफ्नै कामको शिलशिलामा दुबईमा छु ।
दशैं कतिको लागिरा’छ त ?
ठिक ठिकै भन्नुपर्छ, अब हाम्रो समुदायमा खासै त्यतिसाह्रो मनाउने चलन त छैन । तैपनि, एउटा कलाकार भएका नाताले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहन्छन्, त्यसमा बोलाएसी जानैप¥यो । अलि अलि दशैंले छुन थालेको छ भन्नुप¥यो ।
हालसम्म कति एल्बम बजारमा आए यहाँको ?
मेरो आफ्नै साँगीतीक एल्बमका रूपमा साइनो लाइदेऊ न, कति मीठो हाँसो, कौरा, बिचल्लीमा परें, सम्झिँदा मन रुन्छलगायत बजारमा आइसकेका छन् । भने अरू थुप्रै एल्बममा स्वर पनि दिएकी छु ।
आफ्नो साँगीतीक प्रस्तुती दिन कति देश घुम्नुभयो अहिलेसम्म ?
आफ्नो साँगीतीक प्रस्तुतिका क्रममा मैले हङकङ, दुबई, चीन, फ्रान्स, अष्ट्रिया, स्वीट्जरल्याण्ड, भारतलगायतका देशको भ्रमण गरिसकेकी छु ।
तपाई लोकसँगीतमा कसरी लाग्नुभयो ?
खास गरेर म मेरा श्रीमान् सिपी थापामगर र घरपरिवारको प्रेरणाबाट लोक संगितमा लागेकी हुँ । २०६५ सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मलाई अझ लोक संगितमा लागेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भयो अनि त, यही क्षेत्रमै रमाइराखिएकै छु।
तपाईले लोकसँगीतमा लागेर के पाउनुभएको छ, जस्तो लाग्छ ?
मैले लोकसँगीतमा लागेर पाएकी भनेको दर्शक र श्रोताको माया नै हो । पैसा मात्रै ठूलो कुरा होइन, जे जसरी दर्शक अनि श्रोताहरूले माया दिइराख्नुभा’को छ, त्यो नै मेरा लागि ठूलो कुरा हो ।
सम्मान अनि पुरस्कार ?
विभिन्न मेला, महोत्सव र कार्यक्रममा जाँदा धेरै सम्मान र पुरस्कार पनि पाएकी छु ।
लोकसँगीतमा लागेर व्यवसायिक हिसाबले बाँच्न सकिने अवस्था छ ?
राम्रो गर्नेले त, यही क्षेत्रमा लागेर आफ्नो जीवन बनाएका पनि छन् । जे होस्, प्रतिभा र क्षमता भएकालाई खासै समस्या चाहिं छैन । अहिले सीडी क्यासेट बेचेर बाँच्न सक्ने अवस्था त छैन । तैपनि, स्टेज कार्यक्रमहरू निरन्तर पाउन सकियो भनेचाहिं कमाइ राम्रै हुन्छ ।
अन्त्यमा, लोकसँगीतमा लाग्न चाहने नयाँ पिँढीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
नेपाली लोकसंस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि लोकस·ीतको जुन गरिमा छ, त्यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ । संगितलाई बुझेर आएमा एकदमै राम्रो भविष्य छ । अरूको देखासिकी भन्दापनि आफूले राम्ररी मेहेनत गरेर अघि बढ्न सक्यो भने चाहिं राम्रो गर्न सकिन्छ भन्न चाहन्छु ।
Euro 2020: Italy 3-0 Switzerland - Manuel Locatelli scores twice in one-sided win
McIlroy plans 'freewheeling' US Open approach in bid to end majors drought
Sergio Ramos: Spain defender set to leave Real Madrid after 16 years